Ciidamada KMG ah iyo Maleeshiyaad ku dagaalamaya qeybo ka tirsan Baladweyne – SBC
Ciidamada KMG ah iyo Maleeshiyaad ku dagaalamaya qeybo ka tirsan Baladweyne
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baladweyne xarunta gobolkaasi Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi uu ka soconayo dagaal xoogleh oo ka dhacaya xaafad ka tirsan magaaladaas oo lagu magacaabo Howlwadaag.
Dagaalkani ayaa waxa uu u dhexeeyaa ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya kuwooda halkaasi ku sugan iyo maleeshiyo beeleed halkaasi ku dhaqan.
Dad goob jooga yaal ah oo la hadlay xafiiska SBC international ee Garoowe ayaa u sheegay in dagalakaasi uu bilowday ka dib markii ciidamada DKMG ah ay isku dayeen in ay halkaasi ka fuliyaan howlgal balse ay iska hor taageen maleeshiyaad hub ku heystay xaafadaas dabadeedna ay sababtay in uu qarxo dagaalkan.
Inkastoo ay xabadu dhaceyso hadana waxaan la xaqiijin karin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkan, waxaana la filan karaa khasaare maadaama xabadda la isku adeysanayo ay aheyd mid aad u xoogan.
Qaybaha dhaq dhaqaaqa dadweynaha iyo ganacsiga xaafadaas iyo xaafado kale oo ka tirsan Baladweyne ayaa hakad la geliyay waxaana muuqaneysa in bandow lagu rogay magaalada, waxaana lagu arki karaa ciidamada Itoobiyaanka ah iyo kuwa soomaalida oo dhex gooshaya wadooyinka magaalada .
Sikastoo uu xaalku ahaadaba ma ahan markii ugu horeysay oo ay maleeshiyaadkan in ciidamada DKMG ay ku dagaalamaan xaafadaasi, waxayna aheyd bartamihii bishii tagtay markii ay labadan dhinac ku dagaalameen isla xaafadaasi howlwadaag ka dib howlgalo ay ciidamadu sameeyeen.